खानामा गुलियो र प्रोटिनको मात्रा बढी भएको त छैन ? स्वास्थ्यमा पुर्‍याउँछ यस्तो असर – ईमेची डटकम
खानामा गुलियो र प्रोटिनको मात्रा बढी भएको त छैन ? स्वास्थ्यमा पुर्‍याउँछ यस्तो असर
Posted byइमेची संवाददाता November 3, 2019 December 11, 2019 Leaveacomment on खानामा गुलियो र प्रोटिनको मात्रा बढी भएको त छैन ? स्वास्थ्यमा पुर्‍याउँछ यस्तो असर
अझै चाडपर्व सकिएको छैन । मुखमै तिहार र छठ पर्व छन् । अरु तुलनामा यो समयमा माछामासु तथा प्रोटिनयुक्त खानेकुरा बढी प्रयोगमा ल्याइन्छ ।
हामीले विभिन्न खाना र पेय पदार्थको सेवन गर्ने गर्छौ । यसमा गुलियो पेय पदार्थ र प्रोटिनको मात्राको भने ख्याल गर्नुपर्छ । किनकी खानामा खुलियो पेय पदार्थ र प्रोटिनको मात्रा बढी भएको खाना एकैसाथ खानु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने चिकित्सक बताउँछन् ।
“बिएमसी न्युट्रिसन” जर्नलमा प्रकाशित एक अनुसन्धानका अनुसार गुलियो पेय पदार्थ र उच्च प्रोटिनयुक्त खानाहरु जस्तै माछामासु, चीज आदि खानाले शरीरमा बोसोको संचय बढाउने र कालान्तरमा त्यो शरीरको लागि हानिकारक हुने उल्लेख छ ।
मानिसलाई थप नुनिलो खानेकुरा खान प्रेरित गर्ने कुरा पनि सो अनुसन्धानपछि प्रकाशित लेखमा उल्लेख गरिएको छ । सो अनुसन्धान औषत २३ वर्ष उमेर भएका २७ जना युवाहरुमा गरिएको थियो । अनुसन्धानमा भाग लिएकाहरुलाई १५ प्रतिशत र ३० प्रतिशत प्रोटिन भएको खाना र गुलियो पेय पदार्थ खान दिइएको थियो ।
अनुसन्धानमा सम्मिलित पोषण विज्ञ डा. इयान जोनसनका अनुसार गुलियो पेय पदार्थ र प्रोटिनयुक्त खानाले शरीरको शक्तिसंचयको आन्तरिक प्रक्रियामा असर गर्ने र तौल बढाउने तथ्य यस अनुसन्धानले स्थापित गरिदिएको छ ।
त्यसोत सन्तुलित आहार नहुँदा शरीरमा विभिन्न किसिमका रोगको संक्रमण शुरु हुन्छ । त्यसैले रोग लाग्नु भन्दा पहिले यसबारे सचेत हुनु जरुरी हुन्छ ।
Posted byइमेची संवाददाता November 3, 2019 December 11, 2019 Posted inस्वास्थ्य जिवनशैली
आफुले खाएको थाल आँफै माझेर ‘परिवर्तन आँफैबाट’ भन्ने उदाहरण दिए मन्त्री गोकर्ण बिष्टले
विवाहको तयारी गर्दै नायिका ऋचा शर्मा